Yosef kyerɛɛ Farao dae ase (1-36)
Farao hyɛɛ Yosef anuonyam (37-46a)
Yosef hwɛɛ aduan so (46b-57)
41 Mfe abien akyi no, Farao soo dae+ sɛ ogyina Asubɔnten Nil ho. 2 Ohui sɛ anantwi ason a wɔn ho yɛ fɛ na wɔadɔ srade apue afi asubɔnten no mu, na na wɔrewe sare a ɛwɔ Nil ho no.+ 3 Ɔsan huu anantwi ason foforo a wɔn ho yɛ tan na wɔafomfɔn sɛ wofi Nil no mu apue, na wobegyinagyinaa anantwi a wɔadɔ srade no nkyɛn wɔ Nil no ho. 4 Afei anantwi a wɔn ho yɛ tan na wɔafomfɔn no wee anantwi ason a wɔn ho yɛ fɛ na wɔadɔ srade no. Ɛhɔ ara na Farao ani tewee. 5 Ɔsan dae bio, na ɔsoo dae a ɛto so abien. Ohui sɛ hwiit* mmɛtem akɛse ason a ɛyɛ fɛ apuepue dua koro so.+ 6 Afei hwiit mmɛtem ason nteaanteaa a apuei mframa ama atwintwam nso dii akyi bae. 7 Na hwiit mmɛtem nteaanteaa no memenee hwiit mmɛtem akɛse ason a ɛyɛ fɛ no. Afei Farao ani tewee, na ohui sɛ ɛyɛ dae. 8 Ade kyee anɔpa no, na ne ho yeraw no. Enti ɔsoma kɔfrɛɛ Egypt akɔmfo ne anyansafo nyinaa bae, na ɔkaa ne dae no kyerɛɛ wɔn. Nanso wɔn mu biara antumi ankyerɛ Farao dae no ase. 9 Ɛhɔ na nsahyɛfo panyin no ka kyerɛɛ Farao sɛ: “Mɛka me bɔne nnɛ. 10 Bere bi Farao bo fuw ne nkoa, enti ɔde me ne paanootofo panyin no nyinaa koguu afiase wɔ awɛmfo so panyin no fi.+ 11 Afei da bi anadwo yɛn baanu nyinaa sosoo dae. Ná ɛsono obiara dae ne ne nkyerɛase.+ 12 Saa bere no, na yɛne Hebrini aberante bi a ɔyɛ awɛmfo so panyin+ no akoa na ɛwɔ hɔ. Bere a yɛkaa yɛn dae no kyerɛɛ no no,+ ɔkyerɛɛ obiara de ase sɛnea ɛte. 13 Nea ɔkae no baa mu pɛpɛɛpɛ. Me nsa kaa me dibea bio, nanso ɔbarima baako no de, wɔsɛn no.”+ 14 Enti Farao somae sɛ wonkoyi Yosef+ mfi afiase* mmra, na ntɛm ara wɔkɔfaa no bae.+ Oyii n’abogyesɛ,* na ɔsesaa n’ataade, ɛnna ɔkɔɔ Farao anim. 15 Na Farao ka kyerɛɛ Yosef sɛ: “Maso dae bi, nanso obiara ntumi nkyerɛ ase. Na mate wo nka sɛ wo de, wutumi kyerɛ dae ase.”+ 16 Ɛnna Yosef buaa Farao sɛ: “Me de, mene hena? Onyankopɔn na ɔbɛka asɛmpa akyerɛ Farao.”+ 17 Farao ka kyerɛɛ Yosef sɛ: “Mesoo dae no, na migyina Asubɔnten Nil ho. 18 Na mihui sɛ anantwi ason a wɔn ho yɛ fɛ na wɔadɔ srade apue afi Nil no mu, na na wɔrewe sare a ɛwɔ Nil ho no.+ 19 Afei mesan huu anantwi ason foforo a wɔn ho yɛ tan na wɔafomfɔn ayɛ mmɔbɔmmɔbɔ sɛ wɔabegyinagyina hɔ. Minhuu anantwi a wɔn ho yɛ tan saa da wɔ Egypt asaase so baabiara. 20 Na anantwi a wɔafomfɔn na wɔn ho yɛ tan no wee anantwi ason a wɔadɔ srade no. 21 Nanso wɔwee wɔn wiei no, na wunhu mpo sɛ biribi akɔ wɔn yafunu mu, efisɛ na wɔn ho da so ara yɛ tan. Afei m’ani tewee. 22 “Ɛno akyi no, mesan soo dae hui sɛ hwiit mmɛtem akɛse ason a ɛyɛ fɛ apuepue dua koro so.+ 23 Afei hwiit mmɛtem ason nteaanteaa a atwintwam a apuei mframa atwe mu nsu nso bae. 24 Na hwiit mmɛtem nteaanteaa no memenee hwiit mmɛtem ason a ɛyɛ fɛ no. Mekaa eyinom nyinaa kyerɛɛ akɔmfo no,+ nanso wɔn mu biara antumi ankyerɛ me ase.”+ 25 Ɛnna Yosef ka kyerɛɛ Farao sɛ: “Farao dae no nyinaa yɛ asɛm koro. Nea nokware Nyankopɔn no rebɛyɛ na waka akyerɛ Farao.+ 26 Anantwi ason a wɔn ho yɛ fɛ no yɛ mfe ason, na hwiit mmɛtem ason a ɛyɛ fɛ no nso yɛ mfe ason. Dae no nyinaa yɛ asɛm koro. 27 Anantwi ason a wɔafomfɔn na wɔn ho yɛ tan no yɛ mfe ason, na hwiit mmɛtem a ammɔ yiye na apuei mframa atwe mu nsu no nso yɛ mfe ason a ɔkɔm bɛba. 28 Sɛnea maka akyerɛ Farao no, nea nokware Nyankopɔn no bɛyɛ na wayi akyerɛ Farao. 29 “Mfe ason reba a aduan bebu so wɔ Egypt asaase so baabiara. 30 Nanso ɛno akyi no ɔkɔm bɛba mfe ason, na nnipa renkae mpo sɛ aduan abu so wɔ Egypt asaase so pɛn. Eyi bɛyɛ ɔkɔm fitaa a ɛbɛka asaase no nyinaa.+ 31 Na ɔkɔm a ɛbɛba no ano den nti, biribiara nni hɔ a ɛbɛkyerɛ sɛ aduan abu so pɛn wɔ asaase no so. 32 Na dae no a Farao soo no mprenu no kyerɛ sɛ nokware Nyankopɔn no asi asɛm no so dua, na ɛrenkyɛ nokware Nyankopɔn no bɛyɛ nea waka no. 33 “Enti ma Farao nhwehwɛ ɔbarima a n’adwenem da hɔ a onim nyansa, na ɔnyɛ Egypt asaase so panyin. 34 Afei ma Farao mpaw ahwɛfo wɔ asaase no nyinaa so, na aduan biara a ɛbɛba Egypt asaase so no, wonnyigye nkyem anum mu baako bere a aduan abu so mfe ason no.+ 35 Na sɛ saa mmere pa no ba a, ma wonnyigye aduan a ɛbɛba biara na wɔmmoaboa ano mma Farao, na wɔnkora so wɔ nkurow akɛse mu mmɔ ho ban.+ 36 Sɛ ɔkɔm a ɛbɛba Egypt asaase so mfe ason no ba a, ma wɔmfa aduan a wɔde asie no mma ɔmanfo, na ɔkɔm no ampopa wɔn amfi asaase no so.”+ 37 Farao ne n’ahemfi mpanyimfo nyinaa ani gyee asɛm no ho. 38 Enti Farao bisaa n’ahemfi mpanyimfo no sɛ: “Onipa bɛn na yebenya no te sɛ oyi a Onyankopɔn honhom wɔ no so?” 39 Afei Farao ka kyerɛɛ Yosef sɛ: “Sɛ Onyankopɔn ama woahu eyinom nyinaa a, ɛnde obi foforo biara nni hɔ a n’adwenem da hɔ na onim nyansa sɛ wo. 40 Wo na wobɛhwɛ me fi so, na me manfo nyinaa betie wo wɔ biribiara mu.+ Agua a mete so yi nkutoo na mede bɛsen wo.” 41 Na Farao san ka kyerɛɛ Yosef sɛ: “Hwɛ, mereyɛ wo Egypt asaase nyinaa so panyin.”+ 42 Afei Farao yii ahyɛnsode kawa fii ne nsa de hyɛɛ Yosef nsa, na ɔde ataade a wɔde nwera pa ayɛ hyɛɛ no, ɛnna ɔde sika kɔkɔɔ kɔnmuade too ne kɔn mu. 43 Ɛno akyi no, ɔma ɔtenaa ɔhene teaseɛnam a ɛto so abien mu, na nkurɔfo teɛɛm dii n’anim sɛ “Awrek!”* Enti ɔyɛɛ no Egypt asaase nyinaa so panyin. 44 Na Farao ka kyerɛɛ Yosef bio sɛ: “Mene Farao, nanso wommaa kwan a, obiara rentumi nyɛ biribiara* wɔ Egypt asaase so baabiara.”+ 45 Akyiri yi, Farao too Yosef din Safenat-Panea, na ɔde Asenat+ maa no aware. Asenat yɛ On* sɔfo Potifera babea. Yosef fii ase hwɛɛ nneɛma so wɔ* Egypt asaase so.+ 46 Bere a Yosef baa Egypt hene Farao anim* no, na wadi mfe 30.+ Afei Yosef fii Farao anim kokyinkyin Egypt asaase no so nyinaa. 47 Na mfe ason a ɔkae sɛ aduan bɛba no, asaase no maa nnɔbae bebree. 48 Aduan a ɛbaa Egypt asaase so mfe ason no, ɔboaboaa ne nyinaa ano, na wɔkoraa so wɔ nkurow akɛse mu. Nnɔbae a wonya fii afuw biara mu no, ɔkoraa so wɔ kurow kɛse a ɛbɛn hɔ mu. 49 Yosef boaboaa aduan ano ara ma ne dodow yɛɛ sɛ mpoano anwea. Eduu baabi no, wɔankari bio, efisɛ na wontumi mmu ano. 50 Ansa na ɔkɔm no reba no, Yosef ne On* sɔfo Potifera babea Asenat woo mma mmarima baanu.+ 51 Yosef too ne ba panyin no din Manase,*+ efisɛ ɔkae sɛ, “Onyankopɔn ama me werɛ afi m’amanehunu ne me papa fi nyinaa.” 52 Na ɔfrɛɛ nea ɔto so abien no Efraim,*+ efisɛ ɔkae sɛ, “Onyankopɔn ama m’ase atrɛw wɔ asaase a mabrɛ wɔ so no so.”+ 53 Afei mfe ason a aduan buu so wɔ Egypt asaase so no baa awiei,+ 54 na ɔkɔm a Yosef kae sɛ ɛbɛba mfe ason no fii ase.+ Ɔkɔm no baa nsaase nyinaa so, nanso na aduan* wɔ Egypt asaase so baabiara.+ 55 Nkakrankakra ɔkɔm no duu Egypt asaase nyinaa so, na nkurɔfo su guu Farao so sɛ ɔmma wɔn aduan.*+ Ɛnna Farao ka kyerɛɛ Egyptfo nyinaa sɛ: “Monkɔ Yosef nkyɛn. Nea ɔbɛka akyerɛ mo biara, monyɛ.”+ 56 Ɔkɔm no kɔɔ so yɛɛ kɛse wɔ asaase nyinaa so.+ Bere a ɔkɔm no mu yɛɛ den wɔ Egypt asaase so no, Yosef buebuee adan a wɔkora aduan wom no nyinaa, na ɔtɔn aduan maa Egyptfo no.+ 57 Afei nnipa fi aman nyinaa mu baa Egypt bɛtɔɔ aduan fii Yosef hɔ, efisɛ na ɔkɔm no mu ayɛ den wɔ asaase nyinaa so.+
^ Anaa “atoko.”
^ Hebri asɛmfua a wɔkyerɛɛ ase no betumi akyerɛ sɛ oyii n’abogyesɛ ne ne ti nwi.
^ Ɛbɛyɛ sɛ ɛyɛ asɛm a wɔka de bɔ gye obi so ma nkurɔfo di no ni na wɔhyɛ no anuonyam.
^ Nt., “mma ne nsa anaa ne nan so.”
^ Kyerɛ sɛ, Heliopoli.
^ Anaa “fii ase kyinkyinii.”
^ Anaa “kɔyɛɛ adwuma maa Egypt hene Farao.”
^ Ɛkyerɛ, “Nea Ɔma Awerɛfi Ba; Nea Ɔde Awerɛfi Ba.”
^ Ɛkyerɛ, “Masow Aba Mprenu.”